မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် ခေါင်းကိုတစ်ခုခုနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရပါက ဘာကိုမှမမှတ်မိတာမျိုး ကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမျိုး ရုတ်တရက်လုံးဝမှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားတာကတော့ ရှားပါးပေမယ့် တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ဖြစ် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုမျိုးကတော့ လူအများစုမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
မကြာခဏသတိမေ့လျော့ခြင်းဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မမှတ်မိတာဖြစ်စေ မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဆိုင်တွင်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ဆေးတွေအပြင် ဆေးညွှန်းနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ ဆေးတွေတော်တော် များများဟာလည်း မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းဆေးများမှာ စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ၊ စိတ်ပူပန်မှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တဲ့ဆေးများ၊ ဓာတ်မတည့်မှုတွင်အသုံးပြုသော ဆေးများ၊ ကြွက်သားပြေလျော့ဆေး များ၊ အိပ်ဆေးများ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဖြစ်ကြပါတယ်။
2. အရက်၊ ဆေးလိပ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ
အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်တွင် မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့မှုကို ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်သို့အောက်စီဂျင်ရောက်ခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်တာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေဟာ နာမည်နဲ့ လူနဲ့တွဲ၍ မှတ်မိနိုင်မှုအားနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တားမြစ်ဆေးဝါးတွေသောက်သုံးခြင်းဟာလည်း ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် မှတ်မိနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
အချိန်လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ကောင်းစွာအိပ်စက်ခြင်းတွေဟာ မှတ်ဉာဏ်အတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ အိပ်စက်စဉ်မကြာခဏလန့်နိုးခြင်းတွေကြောင့် မောပန်း လွယ်လာတဲ့အပြင် အကြောင်းအရာတွေမှတ်မိမှု အားနည်းလာပါတယ်။
4. စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကြောင့် အာရုံစူူးစိုက်ရန်ခက်ခဲလာတဲ့အပြင် မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ပူပန်မှုတွေကြောင့် စိတ်ခံစားမှုတွေမြင့်မားပြီး မှတ်မိနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဒဏ်ရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟာလည်း မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အသားဓာတ်နဲ့ အဆီဓာတ်လုံလောက်စွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B1 နှင့် B12 တို့ချို့တဲ့ခြင်းဟာ မှတ်ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း (ဥပမာ - ပြုတ်ကျခြင်း၊ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခြင်း) ကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ကာ ခဏတာ (သို့) ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မှတ်ဉာဏ်လည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်သွေးခဲခြင်း (သို့) သွေးယိုခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်သို့သွေးစီးဆင်းမှုမရှိတော့ဘဲ လေဖြတ် ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခဏတာမှတ်ဉာစ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက အကြောင်းအရာများကို မှတ်မိသော်လည်း နေ့လည်စာကို ဘာနဲ့စားသလဲဆိုတာတော့ ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးလာ၍ အခြားစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများလည်း မပြုလုပ်နိုင်တော့သောကြောင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထိခိုက်လာတဲ့ ရောဂါကိုခေါ်လေ့ရှိ ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိ်ုး (ဥပမာ - သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း) ရှိတဲ့အနက် အယ်လ်ဇိုင်းမားသူငယ်ပြန်ရောဂါကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရောဂါဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလာပြီး ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပုံမမှန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ ရောဂါပိုးများ (ဥပမာ - ခုခံအားကျဆင်းတဲ့ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးသွေးပါ အဆုတ်ရောဂါ၊ ကာလသားရောဂါ)
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုပြီး မေ့တတ်လာတဲ့အပြင် နေ့စဉ်ဘဝမှာ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာတွေက အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာပြီဆိုပါက ဆရာဝန်ထံမှ အကြံဉာဏ်ရယူကာ ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေရန်ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းအချို့ကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းအဖြေတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ သွေးနှင့်ဆီးစစ်ဆေးခြင်း၊ အာရုံကြောစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွန်ပတူတာဓာတ်မှတ်ရိုက်ခြင်း၊ သံလိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း စတာတွေကို လိုအပ်သလိုညွှန်ကြားပေလိမ့်မယ်။
ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်၍ ကုထုံးမှာလည်းကွဲပြားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆေးဝါးများကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်တာဆိုပါက ဆေးများကိုပြောင်းလဲသောက်သုံးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုပါက ဖြည့်စွက်အာဟာရများကိုမှီဝဲနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ စိတ်ကျရောဂါဆိုပါက ဖြည့်စွက်အာဟာရများကို မှီဝဲနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကို ကုသပေးခြင်းဖြင့်လည်း ၎င်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ အခြေအနေများတွင်မူ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဖိနပ်စီးခြင်းတို့ကို ပြန်လည်မှတ်မိစေတဲ့ အထူးကုထုံးများဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။ အခြားအကြောင်းများကြောင့်ဆိုလျှင်လည်း အချိန်နှင့်အမျှ မှတ်ဉာဏ်အခြေအနေပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့လိုက်၍ ကုထုံးမှာလည်း သီးခြားစီရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် ဆေးဝါးများသက်သက်ရှိသလို သွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ပြန်ရောဂါအတွက်ဆိုလည်း သွေးပေါင်ချိန်ကျဆေးများပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။